ထူးခြားဆန်းပြား အိုဝင် ခန့်မှန်းများ… – Sport Gaber
ထူးခြားဆန်းပြား အိုဝင် ခန့်မှန်းများ…
ဆောက်သမ်တန် vs ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်တွေ အပါအဝင် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်2ပွဲစဉ်တွေ အတွက် အိုဝင်ရဲ့ သုံးသပ်ချက်နဲ့ ခန့်မှန်းရလဒ်များကတော့
အာစင်နယ် Vs ချယ်ဆီး
ပွဲချိန်။ ။ သြဂုတ်လ 22 ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ ည 10 : 00 နာရီ။
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် သောကြာနေ့က မြင်ခဲ့ရတဲ့ အာစင်နယ်ကို တော်တော် စိတ်ပျက်မိပါတယ်လို့ အိုဝင်က ပြောကြားခဲ့တာ တွေ့ရဘာတယ် ။ အဓိက ကစားသမား တချို့ မပါဝင်နိုင်ဘူး ဆိုတာ သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ် ဘရန့်ဖို့က ထိုက်ထိုက်တန်တန် ကို နိုင်သွားတာပါ။
အာစင်နယ် က ငွေတွေ သုံးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် အာစင်နယ် အရင်ရာသီကထက် အများကြီးရော တိုးတက် လာလို့လား ? ကျနော်တော့ မထင်ဘူးနော်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကထက် သူတို့ အမှတ်ပေးဇယားမှာ အဆင့်တွေ တက်လာရင်တောင် ကျနော် အံ့သြမိတော့မှာ။
ချယ်ဆီးက လုံး၀ လေးစားလောက်စရာပဲ။ သူတို့က ဂိုးသွင်းရခက်တဲ့ အသင်း အဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည်နေဆဲပါ။ လူကာကူကလည်း သူတို့အတွက် ခေါ်ယူမှုကောင်းပဲ လို့ ကျနော် ထင်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက သူတို့ ဂိုးသွင်းအများဆုံးဟာ7ဂိုးသွင်းတဲ့ ဂျော်ဂျင်ဟို ဖြစ်တာတောင် အဆင့် ၄ ရခဲ့တယ်။ ဒီရာသီ တိုက်စစ် ကစားသမား ကောင်း ရထားတဲ့ ချယ်ဆီး ပိုလုပ်နိုင်ဦးမှာပါ။
ဒါဘီပွဲတွေမှာက ဘာမဆို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလန်ဒန်ဒါဘီကတော့ ဘက် မမျှဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ကျနော် တော့ ချယ်ဆီးကပဲ2–0လောက်နဲ့ သက်တောင့်သက်သာ နိုင်သွားမယ် ထင်ပါတယ်။ အာစင်နယ် အတွက်တော့ ဖိအားတွေ တောင်လိုပုံလာဦးမှာပါ။
အိုဝင် ရဲ့ခန့်မှန်းရလဒ်။ ။ အာစင်နယ်0–2ချယ်ဆီး
ဝုဒ် Vs စပါး
ပွဲချိန်။ ။ သြဂုတ်လ 22 ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ ည7: 30 နာရီ။
ဝုဒ်က သူတို့ အခွင့်အရေးတွေကို စပြီး ဆုပ်ကိုင်သင့်ပါပြီ။ ထရာအိုရေးက လက်စတာကို အရေးနိမ့်တဲ့ ပွဲမှာ အခွင့်ကောင်း တချို့ ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူက ခြေစွမ်းတည်ငြိမ် စိတ်ချရတဲ့ အဆုံးသတ် တိုက်စစ် ကစားသမား ဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ဂျီမီနက်ဇ်ကလည်း အကောင်းဆုံး အနေအထား ရှိနေဖို့ လိုတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒဏ်ရာနဲ့ ကာလရှည် နားထားရတာကြောင့် ခြေစွမ်း ပြန်ပြဖို့ အချိန် ယူရဦးမှာပါ။
ကျနေ်ာတော့ ဆန်တို 1 ယောက် မန်စီးတီးကို နိုင်ပြီး အဖွင့်လှသွားတာ ပျော်ရွှင်မိတယ်။ ကိန်းရဲ့ အနာဂတ်က မရေရာ ဖြစ်နေတာကြောင့် အသင်းကို စီမံရတာ လွယ်ကူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် တနင်္ဂနွေနေ့က စပါးတိုက်စစ်ဟာ ခြိမ်းခြောက်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ကိန်း ဘယ်လို ဖြစ်နေနေ ဆွန်က ထူးချွန်ခဲ့ပြီး ဒီရာသီ စပါး အောင်မြင်မှုရဲ့ သော့ချက် ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဝုဒ် က အိမ်ကွင်းမှာ အသင်းကြီးတွေနဲ့ တွေ့ရင် ကောင်းလေ့ ရှိတယ်။ သူတို့ ဒီပွဲကို ရှုံးနိုင်ဖွယ် မမြင်ပါဘူး။ ကျနော်ကတော့ သရေလို့ ထင်တယ်။
အိုဝင် ခန့်မှန်းရလဒ်။ ။ ဝုဒ် 1 – 1 စပါး
လီဗာပူး Vs ဘန်လေ
ပွဲချိန်။ ။ သြဂုတ်လ 21 ရက်၊ စနေနေ့၊ ညနေ6နာရီ။
ကျနော်ကို ဘက်လိုက်တယ်ပဲ ပြောပြောပါ ဒါပေမယ့် လီဗာပူးအသင်းကို ကျနော် အတော်လေး သဘောကျပါတယ်။ ဗန်ဒိုက် ပြန်လာပါပြီ။ အသင်းကို ကြည့်ရတာလည်း အတော်လေး အထိုင်ကျနေပါပြီ။ အရင်အပတ် စနေနေ့က နော့ဝစ်ကို ရင်ဆိုင်ကစားရင်း သက်သောင့်သက်သာ အနိုင်ရခဲ့တယ်။ ဆာလာနဲ့ ဂျိုတာက အတော်လေး ပုံစံကောင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။
ဒီရာသီက ဘန်လေအတွက် ခက်ခဲတဲ့ ဘောလုံးရာသီ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘရိုက်တန်ကို အိမ်ကွင်းမှာ အရေးနိမ့်ခဲ့တယ်။ ပွဲကို အချိန်အကြာကြီး လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူတို့ ယုံကြည်မှုပိုင်း အားနည်းခဲ့ပါတယ်။ ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာ ဒိုင်ချီက သူ့လူစာရင်းအတွက် ကစားသမားသစ် နှစ်ဦးလောက်ကို အားဖြည့်လိုပါလိမ့်မယ်။
အန်ဖီးကွင်းရဲ့ အားပေးမှုတွေက သိပ်ကို ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဘန်လေက မနှစ်တုန်းက အန်ဖီးမှာ လီဗာပူးကို အနိုင်ယူခဲ့ပြီး အမှတ်ပေးပွဲ ၆၈ ပွဲဆက်တိုက် အရေးမနိမ့်တဲ့ လီဗာပူးရဲ့ စံချိန်ကို ကျိုးပြတ်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ အဲ့လိုဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘဲ လီဗာပူးက သက်သောင့်သက်သာဖြင့် ၂-၀ ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အိုဝင် ရဲ့ခန့်မှန်းရလဒ်။ ။ လီဗာပူး2–0ဘန်လေ
မန်စီးတီး Vs နောဝစ်
ပွဲချိန်။ ။ သြဂုတ်လ 21 ရက်၊ စနေနေ့၊ ည 8 : 30 နာရီ။
စပါးနဲ့ပွဲမှာ စိတ်ပျက်ဖွယ်ရလဒ် ရခဲ့တဲ့နောက် ဒီပွဲမှာ စီးတီးက သူ့ရဲ့ ပုံစံတွေအတိုင်း ပြန်လာနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ စပါးနဲ့ပွဲမှာ သူတို့ အခွင့်အရေးတွေ ဖန်တီးနိုင်တယ်။ ဘောလုံးကို အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခွင့်အရေးတွေကို အရမယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အထောင်တိုက်စစ်သမား စစ်စစ် မပါဘဲ သူတို့ အနိုင်ယူနိုင်တယ်ဆိုတာ ပပ်က ပြသလိုမှာကို ကျနော် နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနေ်ာလို တိုက်စစ်သမားဟောင်းအတွက်ကတော့ မန်စီးတီးက ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ ကစားသမားမျိုး ခေါ်ယူဖို့ လိုပါတယ်။
လီဗာပူးကို အရေးနိမ့်ခဲ့တဲ့ နောဝစ်ကို ကြည့်ရတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်တုန်းက တန်းဆင်းသွားတဲ့ အသင်းနဲ့ ဆင်တူနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ဘောလုံးကိုင်ကစားတာ ကောင်းပေမယ့် အခွင့်အရေး ဖန်တီးနိုင်မှု နည်းခဲ့တယ်၊ နော့ဝစ်ရဲ့ နောက်တန်းကလည်း အမြဲတမ်း အားပျော့လွန်းပါတယ်။ နှစ်ခုလုံး မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုရင် သူတို့အတွက် ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။
မန်စီးတီးအတွက်ကတော့ အဖွင့်ပွဲ ရလဒ်ကို တုန့်ပြန်ဖို့ ဒီပွဲက ပြည့်စုံတဲ့ပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ နော့ဝစ်က ခံစစ်ပိုင်း ကောင်းမွန်တဲ့အသင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ဒီပွဲမှာ မန်စီးတီးက အခွင့်အရေးတွေ ရယူပြီး သက်သောင့်သက်သာ အနိုင်ရသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အိုဝင် ရဲ့ခန့်မှန်းရလဒ်။ ။ မန်စီးတီး5–0နောဝစ်
ဆောက်သမ်တန် Vs ယူနိုက်တက်
အိမ်ကွင်းမှာ လိဒ် ကို အနိုင်ရတဲ့ပွဲအတွင်း ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားပုံက ကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ လိဒ်ကိုက သူတို့ကို လွယ်ကူစေခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားပုံက အတော်လေး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ပေါ.ပေါ့ဘာနဲ့ ဖာနန်ဒက် က သိပ်ကောင်းပါတယ် အခွင့်အရေးတွေလည်း ထပ်ခါထပ်ခါ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။
ဂရင်းဝုဒ် ဂိုးသွင်းနိုင်တာကို မြင်ရတာကလည်း သိပ်ကောင်းပါတယ်။ သူက ကမ္ဘာအဆင့် တိုက်စစ်သမားဖြစ်လာမယ်လို့ ကျနော် မြင်ထားတယ်။ ယူနိုက်တက်က ဆန်ချိုနဲ့ ဗာရာနီ တို့ကို ပွဲထွက် ကစားသမား ဦးစာရင်းထဲ မထည့်ရသေးပါဘူး။ ဒါတောင်မှ သူတို့က သိပ်ကောင်းနေပါတယ်။
အဲဗာတန်နဲ့ပွဲမှာ ဆောက်သမ်တန်က အစကောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကစားသမားသစ် အမ်းစထရောင်းက ထူးချွန်စွာပဲ သွင်းဂိုး စယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒုတိယပိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းလာတာက စိုးရိမ်စရာပါ၊ အမ်းစထရောင်းကလွဲရင် သူတို့မှာ ဂိုးသွင်းနိုင်မယ့်သူလည်း မမြင်မိပါဘူး။ မနှစ်တုန်းက သူတို့အသင်းဟာ လိဂ်ရဲ့ ဒုတိယ ပေးဂိုးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့နေရာအတွက် တိုးတက်လာမှုတွေကို ကျနော်တော့ မမြင်မိပါဘူး။
ယူနိုက်တက် အနိုင်ကလွဲလို့ ဒီပွဲမှာ အခြား ဘာရလဒ်မှ မမြင်မိပါဘူး။ အရင်အပတ်တုန်းက ယူနိုက်တက်က သိပ်ကောင်းတဲ့ ပုံစံမှာ ရှိနေခဲ့ပြီး သူတို့က အမှားများတဲ့ ဆောက်သမ်တန် နောက်တန်း ကို အမြတ်ထုတ်နိုင်မယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။
အိုဝင် ရဲံခန့်မှန်းရလဒ်။ ။ ဆောက်သမ်တန် 1 –3ယူနိုက်တက်
အခြားပွဲစဉ်တွေအတွက် အိုဝင် ရဲ့ခန့်မှန်းရလဒ်များ
ဗီလာ2– 1 နယူးကာဆယ်
ပဲလေ့ 1 –0ဘရန်ဖို
လိဒ် 1 –2အဲဗာတန်
ဘရိုက်တန်2–0ဝက်ဖို့
ဝက်ဟမ်း 1 – 1 လက်စတာ
ဆောကျသမျတနျ vs ယူနိုကျတကျ ပှဲစဉျတှေ အပါအဝငျ ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ2ပှဲစဉျတှေ အတှကျ အိုဝငျရဲ့ သုံးသပျခကြျနဲ့ ခန့ျမှနျးရလဒျမြားကတော့
အာစငျနယျ Vs ခယြျဆီး
ပှဲခြိနျ။ ။ သွဂုတျလ 22 ရကျ၊ တနငျ်ဂနှနေေ့၊ ည 10 : 00 နာရီ။
ပွီးခဲ့တဲ့အပတျ သောကွာနေ့က မွငျခဲ့ရတဲ့ အာစငျနယျကို တောျတောျ စိတျပကြျမိပါတယျလို့ အိုဝငျက ပွောကွားခဲ့တာ တှေ့ရဘာတယျ ။ အဓိက ကစားသမား တခြို့ မပါဝငျနိုငျဘူး ဆိုတာ သိပါတယျ၊ ဒါပမေယျ ဘရန့ျဖို့က ထိုကျထိုကျတနျတနျ ကို နိုငျသှားတာပါ။
အာစငျနယျ က ငှတှေေ သုံးထားတယျ။ ဒါပမေယ့ျ အာစငျနယျ အရငျရာသီကထကျ အမြားကွီးရော တိုးတကျ လာလို့လား ? ကနြောျတော့ မထငျဘူးနောျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီကထကျ သူတို့ အမှတျပေးဇယားမှာ အဆင့ျတှေ တကျလာရငျတောငျ ကနြောျ အံ့သွမိတော့မှာ။
ခယြျဆီးက လုံးဝ လေးစားလောကျစရာပဲ။ သူတို့က ဂိုးသှငျးရခကျတဲ့ အသငျး အဖွဈ ဆကျလကျ ရပျတညျနဆေဲပါ။ လူကာကူကလညျး သူတို့အတှကျ ခေါျယူမှုကောငျးပဲ လို့ ကနြောျ ထငျတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက သူတို့ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးဟာ7ဂိုးသှငျးတဲ့ ဂြောျဂငြျဟို ဖွဈတာတောငျ အဆင့ျ ၄ ရခဲ့တယျ။ ဒီရာသီ တိုကျစဈ ကစားသမား ကောငျး ရထားတဲ့ ခယြျဆီး ပိုလုပျနိုငျဦးမှာပါ။
ဒါဘီပှဲတှမှောက ဘာမဆို ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယ့ျ ဒီလနျဒနျဒါဘီကတော့ ဘကျ မမြှဘူး ဖွဈနတေယျ။ ကနြောျ တော့ ခယြျဆီးကပဲ2–0လောကျနဲ့ သကျတောင့ျသကျသာ နိုငျသှားမယျ ထငျပါတယျ။ အာစငျနယျ အတှကျတော့ ဖိအားတှေ တောငျလိုပုံလာဦးမှာပါ။
အိုဝငျ ရဲ့ခန့ျမှနျးရလဒျ။ ။ အာစငျနယျ0–2ခယြျဆီး
ဝုဒျ Vs စပါး
ပှဲခြိနျ။ ။ သွဂုတျလ 22 ရကျ၊ တနငျ်ဂနှနေေ့၊ ည7: 30 နာရီ။
ဝုဒျက သူတို့ အခှင့ျအရေးတှကေို စပွီး ဆုပျကိုငျသင့ျပါပွီ။ ထရာအိုရေးက လကျစတာကို အရေးနိမ့ျတဲ့ ပှဲမှာ အခှင့ျကောငျး တခြို့ ရခဲ့တယျ။ ဒါပမေယ့ျ သူက ခွစှေမျးတညျငွိမျ စိတျခရြတဲ့ အဆုံးသတျ တိုကျစဈ ကစားသမား ဟုတျခဲ့ဘူး။ ဂြီမီနကျဇျကလညျး အကောငျးဆုံး အနအေထား ရှိနဖေို့ လိုတယျ။ ဒါပမေယ့ျ ဒဏျရာနဲ့ ကာလရှညျ နားထားရတာကွောင့ျ ခွစှေမျး ပွနျပွဖို့ အခြိနျ ယူရဦးမှာပါ။
ကနြေျာတော့ ဆနျတို 1 ယောကျ မနျစီးတီးကို နိုငျပွီး အဖှင့ျလှသှားတာ ပြောျရှှငျမိတယျ။ ကိနျးရဲ့ အနာဂတျက မရရော ဖွဈနတောကွောင့ျ အသငျးကို စီမံရတာ လှယျကူမှာ မဟုတျပါဘူး။
ဒါပမေယ့ျ တနငျ်ဂနှနေေ့က စပါးတိုကျစဈဟာ ခွိမျးခွောကျနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။ ကိနျး ဘယျလို ဖွဈနနေေ ဆှနျက ထူးခြှနျခဲ့ပွီး ဒီရာသီ စပါး အောငျမွငျမှုရဲ့ သော့ခကြျ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ဝုဒျ က အိမျကှငျးမှာ အသငျးကွီးတှနေဲ့ တှေ့ရငျ ကောငျးလေ့ ရှိတယျ။ သူတို့ ဒီပှဲကို ရှုံးနိုငျဖှယျ မမွငျပါဘူး။ ကနြောျကတော့ သရလေို့ ထငျတယျ။
အိုဝငျ ခန့ျမှနျးရလဒျ။ ။ ဝုဒျ 1 – 1 စပါး
လီဗာပူး Vs ဘနျလေ
ပှဲခြိနျ။ ။ သွဂုတျလ 21 ရကျ၊ စနနေေ့၊ ညနေ6နာရီ။
ကနြောျကို ဘကျလိုကျတယျပဲ ပွောပွောပါ ဒါပမေယ့ျ လီဗာပူးအသငျးကို ကနြောျ အတောျလေး သဘောကပြါတယျ။ ဗနျဒိုကျ ပွနျလာပါပွီ။ အသငျးကို ကွည့ျရတာလညျး အတောျလေး အထိုငျကနြပေါပွီ။ အရငျအပတျ စနနေေ့က နော့ဝဈကို ရငျဆိုငျကစားရငျး သကျသောင့ျသကျသာ အနိုငျရခဲ့တယျ။ ဆာလာနဲ့ ဂြိုတာက အတောျလေး ပုံစံကောငျးမှာ ရှိနပေါတယျ။
ဒီရာသီက ဘနျလအေတှကျ ခကျခဲတဲ့ ဘောလုံးရာသီ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဘရိုကျတနျကို အိမျကှငျးမှာ အရေးနိမ့ျခဲ့တယျ။ ပှဲကို အခြိနျအကွာကွီး လှှမျးမိုးနိုငျခဲ့ပမေယ့ျ သူတို့ ယုံကွညျမှုပိုငျး အားနညျးခဲ့ပါတယျ။ ဈေးကှကျမပိတျခငျမှာ ဒိုငျခြီက သူ့လူစာရငျးအတှကျ ကစားသမားသဈ နှဈဦးလောကျကို အားဖွည့ျလိုပါလိမ့ျမယျ။
အနျဖီးကှငျးရဲ့ အားပေးမှုတှကေ သိပျကို ကောငျးမှနျပါတယျ။ ဘနျလကေ မနှဈတုနျးက အနျဖီးမှာ လီဗာပူးကို အနိုငျယူခဲ့ပွီး အမှတျပေးပှဲ ၆၈ ပှဲဆကျတိုကျ အရေးမနိမ့ျတဲ့ လီဗာပူးရဲ့ စံခြိနျကို ကြိုးပွတျစခေဲ့တာဖွဈတယျ။ ဒီတဈကွိမျမှာတော့ အဲ့လိုဖွဈလာမှာ မဟုတျဘဲ လီဗာပူးက သကျသောင့ျသကျသာဖွင့ျ ၂-၀ ဆိုတဲ့ ရလဒျနဲ့ အနိုငျရသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အိုဝငျ ရဲ့ခန့ျမှနျးရလဒျ။ ။ လီဗာပူး2–0ဘနျလေ
မနျစီးတီး Vs နောဝဈ
ပှဲခြိနျ။ ။ သွဂုတျလ 21 ရကျ၊ စနနေေ့၊ ည 8 : 30 နာရီ။
စပါးနဲ့ပှဲမှာ စိတျပကြျဖှယျရလဒျ ရခဲ့တဲ့နောကျ ဒီပှဲမှာ စီးတီးက သူ့ရဲ့ ပုံစံတှအေတိုငျး ပွနျလာနိုငျမယျလို့ မြှောျလင့ျထားပါတယျ။ စပါးနဲ့ပှဲမှာ သူတို့ အခှင့ျအရေးတှေ ဖနျတီးနိုငျတယျ။ ဘောလုံးကို အကောငျးဆုံး ထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့ပမေယ့ျ အခှင့ျအရေးတှကေို အရမယူနိုငျခဲ့ပါဘူး။ အထောငျတိုကျစဈသမား စဈစဈ မပါဘဲ သူတို့ အနိုငျယူနိုငျတယျဆိုတာ ပပျက ပွသလိုမှာကို ကနြောျ နားလညျပါတယျ။ ဒါပမေယ့ျ ကနြေျာလို တိုကျစဈသမားဟောငျးအတှကျကတော့ မနျစီးတီးက ဂိုးသှငျးနိုငျတဲ့ ကစားသမားမြိုး ခေါျယူဖို့ လိုပါတယျ။
လီဗာပူးကို အရေးနိမ့ျခဲ့တဲ့ နောဝဈကို ကွည့ျရတာ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈတုနျးက တနျးဆငျးသှားတဲ့ အသငျးနဲ့ ဆငျတူနဆေဲဖွဈပါတယျ။ သူတို့ ဘောလုံးကိုငျကစားတာ ကောငျးပမေယ့ျ အခှင့ျအရေး ဖနျတီးနိုငျမှု နညျးခဲ့တယျ၊ နော့ဝဈရဲ့ နောကျတနျးကလညျး အမွဲတမျး အားပြော့လှနျးပါတယျ။ နှဈခုလုံး မပွောငျးလဲနိုငျဘူးဆိုရငျ သူတို့အတှကျ ခကျခဲနိုငျပါတယျ။
မနျစီးတီးအတှကျကတော့ အဖှင့ျပှဲ ရလဒျကို တုန့ျပွနျဖို့ ဒီပှဲက ပွည့ျစုံတဲ့ပှဲ ဖွဈလာမှာပါ။ နော့ဝဈက ခံစဈပိုငျး ကောငျးမှနျတဲ့အသငျး မဟုတျပါဘူး။ ဒီတော့ ဒီပှဲမှာ မနျစီးတီးက အခှင့ျအရေးတှေ ရယူပွီး သကျသောင့ျသကျသာ အနိုငျရသှားမယျလို့ ထငျပါတယျ။
အိုဝငျ ရဲ့ခန့ျမှနျးရလဒျ။ ။ မနျစီးတီး5–0နောဝဈ
ဆောကျသမျတနျ Vs ယူနိုကျတကျ
အိမျကှငျးမှာ လိဒျ ကို အနိုငျရတဲ့ပှဲအတှငျး ယူနိုကျတကျရဲ့ ကစားပုံက ကောငျးမှနျခဲ့ပါတယျ။ လိဒျကိုက သူတို့ကို လှယျကူစခေဲ့တာဖွဈပမေယ့ျ ယူနိုကျတကျရဲ့ ကစားပုံက အတောျလေး ကောငျးမှနျပါတယျ။ ပေါ.ပေါ့ဘာနဲ့ ဖာနနျဒကျ က သိပျကောငျးပါတယျ အခှင့ျအရေးတှလေညျး ထပျခါထပျခါ ဖနျတီးနိုငျခဲ့တယျ။
ဂရငျးဝုဒျ ဂိုးသှငျးနိုငျတာကို မွငျရတာကလညျး သိပျကောငျးပါတယျ။ သူက ကမ်ဘာအဆင့ျ တိုကျစဈသမားဖွဈလာမယျလို့ ကနြောျ မွငျထားတယျ။ ယူနိုကျတကျက ဆနျခြိုနဲ့ ဗာရာနီ တို့ကို ပှဲထှကျ ကစားသမား ဦးစာရငျးထဲ မထည့ျရသေးပါဘူး။ ဒါတောငျမှ သူတို့က သိပျကောငျးနပေါတယျ။
အဲဗာတနျနဲ့ပှဲမှာ ဆောကျသမျတနျက အစကောငျးခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ကစားသမားသဈ အမျးစထရောငျးက ထူးခြှနျစှာပဲ သှငျးဂိုး စယူနိုငျခဲ့တယျ။ ဒုတိယပိုငျးမှာ သူတို့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျ ကဆြငျးလာတာက စိုးရိမျစရာပါ၊ အမျးစထရောငျးကလှဲရငျ သူတို့မှာ ဂိုးသှငျးနိုငျမယ့ျသူလညျး မမွငျမိပါဘူး။ မနှဈတုနျးက သူတို့အသငျးဟာ လိဂျရဲ့ ဒုတိယ ပေးဂိုးအမြားဆုံးဖွဈပါတယျ။ အဲ့နရောအတှကျ တိုးတကျလာမှုတှကေို ကနြောျတော့ မမွငျမိပါဘူး။
ယူနိုကျတကျ အနိုငျကလှဲလို့ ဒီပှဲမှာ အခွား ဘာရလဒျမှ မမွငျမိပါဘူး။ အရငျအပတျတုနျးက ယူနိုကျတကျက သိပျကောငျးတဲ့ ပုံစံမှာ ရှိနခေဲ့ပွီး သူတို့က အမှားမြားတဲ့ ဆောကျသမျတနျ နောကျတနျး ကို အမွတျထုတျနိုငျမယျလို့ ကနြောျ ထငျပါတယျ။
အိုဝငျ ရဲံခန့ျမှနျးရလဒျ။ ။ ဆောကျသမျတနျ 1 –3ယူနိုကျတကျ
အခွားပှဲစဉျတှအေတှကျ အိုဝငျ ရဲ့ခန့ျမှနျးရလဒျမြား
ဗီလာ2– 1 နယူးကာဆယျ
ပဲလေ့ 1 –0ဘရနျဖို
လိဒျ 1 –2အဲဗာတနျ
ဘရိုကျတနျ2–0ဝကျဖို့
ဝကျဟမျး 1 – 1 လကျစတာ
ခ ရက် ဒစ်
ချဲလ်ဆီး ၊ မန်စီးတီး နဲ့ ပွဲမတိုင်မှီမှာ အာဆင်နယ် နည်းပြ အာတီတာကို သတိပေး စကားဆိုလိုက်တဲ့ ဂလင်းဂျွန်ဆင်….
အာဆင်နယ်ပရိတ်သတ်တွေ ဝေဖန်မှုပြစ်တင်မှုဟာ အသင်းကို အားပေးရာမရောက်ပဲ တွင်းအောက်ကို တွန့်ပို့နေကြောင်း အာတီတာပြောဆို…